“ လူပျင်းများ တစ်ရေးနိုးလေသောအခါ…” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “ လူပျင်းများ တစ်ရေးနိုးလေသောအခါ…”
“ လူပျင်းများ တစ်ရေးနိုးလေသောအခါ…”
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Jun 1, 2013 in Copy/Paste | 23 comments
ဒီပို့ စ်ကို ရေးရင် ပြသနာကြီးနိုင်တယ်…လူမုန်းများနိုင်တယ်…အထင်လွဲနိုင်တယ်..
ဒါကြောင့်လဲ ပြောချင်တာတွေကို မြိုသိပ်ပြီး နေနေရတယ်..။ အထိအရှမခံနိုင်စရာ အကြောင်းဖြစ်နေတယ်..။ ကိုယ်ကလဲ ဘာမှ မပြောချင်ပေမယ့် ညတိုင်ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့အခါ
ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ တရားထိုင်တဲ့အခါဘဲဖြစ်ဖြစ်..နောက်ဆုံး ဘုရားစင်ရှေ့ က ဖြတ်လျှောက်တဲ့အခါတောင်..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တဦးဖြစ်ပြီး ဒီဘာသာအတွက်မရေးရဲတာကို …ငါတော်တော်သတ္တိ ကြောင်တဲ့ ကောင်လို့ လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြင်လာလို့ ချရေးလိုက်တာ..။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဘုရားရှင်ကို ရှက်ကြောက်အားနာလာလို့ ရေးတာ..။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက လူမျိုးရေး ဘာသာရေး စီးပွားရေး ပေါင်းပြီးရှုပ်နေတာဘဲ။
ခွဲပြီးကြည့်တတ်ဘို့ လိုတယ်.. ပိုင်းခြားဘို့ လိုတယ်..။
နောက်..ဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာက ဒါမျိုးလား…
ဘုရားရှင် အဆုံးအမနဲ့ ညီရဲ့ လား..ဘုရားရှင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဒီလိုစရိုက်တွေ ဖြစ်စေချင်တာလား…။
ဒီလိုတွေလုပ်ဘို့ ဆုံးမခဲ့လို့ လား..
တွေးစရာ… မေးစရာ အများကြီးဘဲ..။
သူ့ ခေတ်သူ့ အခါက ဗုဒ္ဓဘုရားဟာ နီပေါ၊သီဟိုဠ် နဲ့ အိန္ဒိယ မှာ တုနိုင်းမရှိ..တရားမှာရော၊
ဘုရားတု တရားတုတွေထဲက လိုင်းခွဲထွက်တယ်..။ ကျင့်ကြံပုံ ၊ နေမှု၊ စားမှု အားလုံးဘဲ၊၊
ဖကီဆာဒူးတွေ ဆံပင်ကို အလိပ်လိပ် အခဲခဲ ထားချိန်မှာ.. ဆံကိုပယ်ပြီး ဦးပြည်းကတုံးနဲ့ ။
ဆာဒူးတွေ ကိုယ်တုံးလုံးနေချိန်မှာ သင်္ကန်းရုံတယ်..။
ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏတွေ မီးလွတ် ရေလွတ်စားချိန်မှာ… ဆွမ်းကို အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး
ဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့သာကီဝင် အမျိုးအနွယ်က လူနည်းစု ဖြစ်ပေမယ့်… လူမျိုးစု ကြီးထွားအောင် မလုပ်ဘူး…
အားများသူ လူမျိုးစုကိုလဲ မပုတ်ခတ်ဘူး..။
အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ၊ကျင့်ကြံမှု တရားဆိုင်ရာကိုသာ အဓိက ထားတယ်.။
ဒါကြောင့်လဲ ဒေ၀ဒတ်ရဟန်းက အသားလွတ်၊ အသက်လွတ် စားဘို့ အယူအဆကို တင်ပြ
လျှောက်ထားတဲ့ အခါတုန်းက ငြင်းပယ်ချခဲ့တယ်..။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သတ်သတ်လွတ်စားတာက ဟိန္ဒူ အကျင့် ဖြစ်နေတယ်..။
ရှင်းတယ်.. ဗုဒ္ဒဘုရားက သူများနောက်လိုက် မလုပ်ဘူး…။
အယူအဆ အကျင့် လိုင်းပူးမခံဘူး..။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတော်တော်များများက အဘိုးအဘွား အဖေအမေလက်ထက်တွေထဲက
နေဖင်ထိုးတဲ့ အထိအိပ်။ အိပ်ယာကနိုးတော့ ကုလားဆိုင်က လက်ဖက်ရည်လေးနဲ့ ..မလိုင်လေး
နဲ့ …တရုပ်ဆိုင်က နံပြားလေး တို့ စားပြီ….သတင်းစာလေးဖတ်လို့ …
ကုလားခလေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် အိမ်က စီးပွားရေး ၀ိုင်းလုပ်ချိန်မှာ…..
ကျနော်တို့ က ဂွေလှိမ့်ကစားလို့ ကောင်းတုန်း..။
တရုပ် ခလေးတွေ နေကြာစေ့ ထုတ်နေချိန်မှာ ကျနော်တို့ က ကာတွန်းစာအုပ်လေးတွေနဲ့ ..။
နေ့ ခင်း ဆို လမ်းထိပ်က ကုလားစမူဆာ…ညဖက်ဆို လမ်းထိပ်က ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ။
သူတို့ တွေ မိသားစု တက်ညီ လက်ညီ လုပ်နေချိန်မှာ…
အားချိန်လေးမှာတောင် ကစားခွင့် မရှိတဲ့ ကုလားလေးတွေ…တရုပ် သူငယ်ချင်းလေးတွေကို
ကိုယ်က သနားတဲ့ အမြင်လေးနဲ့ ကြည့်လို့ ပေါ့..။
တရုပ်မိသားစုက ကုန်စုံဆိုင်အတွက် အိပ်တွေ ချိုး၊ ကောက်ကပ်ရောင်းတော့ အိမ်က လူကြီးတွေက.. သနားသဖြင့် အိမ်က သတင်းစာ ဟောင်းတွေပေးလို့ …။
ကံ ဥာဏ် ၀ရိယ ဆိုတာ အောက်ခြေအလုပ်တွေ လုပ်တဲ့ ကုလားတွေ တရုပ်တွေ အတွက်
ထားခဲ့တဲ့ စကားလို့ သတ်မှတ်လေသလို…..။
မလုပ်ရဲတာကို ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှုနဲ့ လူကြားကောင်းအောင် ဖုံး ကာခဲ့တယ်…
ကံ အကျိုးပေးကို ညောင်ရေအိုးထိုးရင်း နတ်ကောင်းစောင်မ တာကို မျှော်နေခဲ့ကြတယ်..
သူများလူမျိုးတွေ ဇီးထုပ်၊ နေကြာစေ့ထုပ်၊ မဆလာထုပ်ရောင်းချိန်မှာ… ကုန်စုံဆိုင် ပင်မဒိုင်
လက်လီလက်ကား ကုန်ဆိုင်တွေ လုပ်ဘို့ ပက်လက်ကုလားထိုင်လေးမှာ ပါးစပ်အရသာ ခံပြောနေခဲ့တယ်..။
အိပ်နေခဲ့ကြတာ နှစ် ၂၀ ..၃၀..၄၀….၅၀ ကြာမှ တစ်ရေးနိုးပြီး….
ဗုဒ္ဒဘုရားရှင်တောင် မထွင်ခဲ့တဲ့ တံဆိပ်တွေ နံပါတ်တွေ ကောက်လုပ်ရင်း…
မနာလိုစိတ်ကို သာသနာ တံဆိပ်ရောကပ်လို့ …မလုပ်သင့်တာ လုပ်ကြတယ်..။
ဗုဒ္ဒဘုရားရှင်က ခေတ်ပြိုင် ကာလ တိုက်ခိုက်သူ ပေါများချိန်မှာတောင်…
ဘာအမှတ်တံဆိပ်မှ မထွင်ဘူး… နောက်လိုက်မလုပ်ဘူး…
ခုကြည့်ပါဦး…ဗူဒ္ဒဘုရားရှင် သာသနာထက် နှစ်၇၀၀ ကျော်နောက်ကျမှ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့
သူများဘာသာကို တုပြီး နံပါတ်တွေ ထွင်ကြတယ်…။ နောက်ဆက်တွဲက..သွေးချောင်းတွေစီးတယ်။အိုးအိမ်တွေ ပျက်စီးတယ်…မီးလောင်တိုက် သွင်းတယ်..။
မိသားစုတွေ ဘ၀ပျက်တယ်.. သေကြတယ်…။
ကမ္ဘာ့ တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေက အစ လေးစားခဲ့ကြတဲ့ဗုဒ္ဒအယူအဆ..။
ငါတို့ ခေတ်ရောက်မှ “ …..အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဒဘာသာ” တဲ့..။
သူလဲ အကျိုးမရှိ ကိုယ်လဲ အကျိုးမရှိပြောတာ မလုပ်ဘို့ ဘုရားဟောခဲ့တယ်..
သူများအကျိုးပျက်စီးပြီး.. ကိုယ်အကျိုးရှိဘို့ လုပ်တာကို ဘုရားတားမြစ်ခဲ့တယ်..။
သေချာစဉ်းစားပြီး …ဘုရားရှင်ကို အားနာကြပါဦး..။
ကိုယ့်နာမည် လူသိဘို့ ..ကိုယ့်ပါဝါတက်ဘို့ ..လုပ်မယ် ဆိုရင်…
ဒေ၀ဒတ် သတ်သတ်လွတ်စားဘို့ အသစ်ထွင်သလို ဘုရားထက် သားတစ်လကြီး မလုပ်ကြပါနဲ့ ..။
စာရေးဆရာ ၊ ဒါရိုက်တာကြီး ဘဘဦးသုခ သာ သက်ရှိထင်ရှားရှိမယ်ဆိုရင်တော့…
ကိုယ့်ကို…… ဆွမ်းကွမ်း ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယိကာတွေ သွေးမြေကျ…ဘာသာမတူသူတွေ ဘ၀ပျက် သေကြေ…
ကိုယ့်ဒါယိကာတွေလက် သွေးစွန်းပြီး ..စီးပွားတက်လာလို့ချမ်းသာလာလို့ 
“ ရဟန်းမစားအပ်သော ဆွမ်းတစ်နပ်” အမည်နဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက်ထပ်ရိုက်ပေးဘို့ သာ… တောင်းဆိုချင်မိပါတယ်…။
ဒီလိုဆွမ်းမျိုးကို ဘုရားရှင် ဘုန်းပေးမှာ မဟုတ်ဘူး..။
ဟုတ်မှန်၊ကျိုးရှိ၊ရင် သူနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ/မနှစ်သက်သညိဖြစ်စေ ပြောသင့်ရေးသင့်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက သက်သတ်လွတ်ဆွမ်း မပညတ်ခဲ့သလို အသားစားရမယ်လို့လည်း မပြောခဲ့ဘူး.. မစာခင်း စားဆဲ စားပြီး တဏှာဖယ်ခွာ မမေ့မလျော့ သုံးဆောင်ဖို့ မှာခဲ့ပါတယ်။ နို့မို့ရင် သက်သတ်လွတ်စားတာ အပြစ်လုပ်ပြီး မိမိ ကိုယ်တိုင်က အသားမစားရ ဘီလူးသရဲစီး သလိုဖြစ်နေတာ မျက်ကွယ်ပြု နေမိတတ်တယ်။ သမိုင်းကြောင်း မညာကြေး တူးဖော်ကြည့်ပါ.. ဗုဒ္ဓဘုရား ပွင့်ချိန် အိန္ဒိယမှာ သက်သက်လွတ်စားခြင်း အားကောင်းချိန်ဖြစ်လို့ သက်သတ်လွတ် ဆွမ်းဟင်းများပါလိမ့်မယ်… သို့သော် ဓမ္မဆိုတာ ဝေနေယျ အားလုံးနဲ့ဆိုင်လို့ ခွဲခြားခွဲခြား လုပ်ခွင့်မရှိ.. လှူသူ သဒ္ဓါတရား ငှဲ့ညှာပြီး ဆွမ်းဘုမ်းပေးရတယ်။ သက်သတ်လွတ်စားလို့ အာပတ်မသင့်.. သက်သတ်လွတ် စားသူနဲ့ အသားငါးမပါ မစားရမနေနိုင်သူ နှစ်ဦး အကျင့်ခြင်းတူရင် ဘယ်သူပိုမြတ်မယ် ထင်သလဲ… သမထ ကံနယ်မှာ ပြောပါတယ်..။ အဲလိုမဟုတ် အသားစားတာ မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြောသူကိုယ်၌ အစွဲကင်းကင်း စားတတ်ဖို့လိုမယ်နော.. အဲလိုဖစ်ပီလား..
ပြောသူကိုယ်၌ အစွဲကင်းကင်း စားတတ်ဖို့လိုမယ်နော.. အဲလိုဖစ်ပီလား..
ပို့ စ် ပိုင်ရှင်ကြီးရေ
ဘုရားနဲ့ ချီ ပြီး ရေးလာတော့
ကိုယ်ရှာဖွေတဲ့ စီးပွားဥစ္စာကို ကိုယ်တိုင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် နိုင်စွမ်း ရှိ ရ မယ် တဲ့
ဘယ်သူ က ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ကိုယ့် မြေ ..
ကိုယ့် မြို့ 
ကိုယ့် စီးပွားရေး ၊ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ ကို ထိပါး စော်ကားလာရင်တော့
ဝေသန္တရာ မင်းကြီး လို ရေစက်ခွက်လေး ကိုင်ပြီး ငုတ်တုတ် ဝမ်းသာပေးရမှာလားဗျ
အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ၊ အခြေခံပညာမူလတန်း ဖတ်စာထဲကတဲက စ သင်ပေးမှ ရမယ် မှတ်တယ်
““ မင်း ဘာ လုပ်ခံရ ခံရ ငြိမ်ငြိမ်နေ ””
““ မင်း လူမျိုး ကို သူများသတ်လဲ ငြိမ်ငြိမ်နေ ””
““ မင်း လူမျိုး ကို စော်ကားသွားလဲ မျက်နှာလွဲနေ ””
““ မင်း အိမ်ယာ ကို ကျူးကျော် ဖျက်စီးရင် လက်ခုတ်တီးပေး ””
““ မင်း ခေါင်း ပေါ် မှာ ချီး တက် ယို သွား တောင် ပြုံး ပြုံး နေ ””
အတန်းပညာရေးတိုင်းမှာ မဖြစ် မနေ ထည့် သင် ခိုင်းပေါ့ဗျာ
တစ်ခါတလေ ကျ ဖြစ်သင့်တာ တစ်ခု ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာ တစ်ခု မတူညီ ကွဲပြားတာလေးတွေတော့ ရှိမယ်ထင်ပါသည် ။
ဒါပေသိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ သည်းခံကာမေတ္တာထားရမယ် ဆိုပေသည့် ကိုယ့်အသားထိရင်တော့ ပုတုဇဉ်သဘော နာတတ်ကြတာဘဲလေ။ သူများကို ကိုယ်ကစပြီး ဒုက္ခမပေးတာက အနေမှန်ပါတယ်ဆို ပေသည့် ကိုယ့်ကိုဒုက္ခလာပေးရင် ငြိမ်လို့သာခံရမှာလား အဲလိုဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးလေ ဘာသာရေးအရ ကောင်းသော်ညားလည်း တစ်ခါတလေ လူမျိုးရေး နိုင်ငံအရေး အရ တော်လှန်သင့်ရင်တော်လှန်ရမှာပါဘဲ၊ ဘာသာရေးအလိုအရ သည်းခံကာ ဘာမှမလုပ်ဘဲနေခဲ့ ကြရင် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးတောင် ရခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး၊ အခုလောက်ဆို အင်္ဂလိပ်ကပြား ဂျပန်ကပြား လေးတွေကို မြန်မာဟုသာ ကင်းမွန်းတပ်ရမယ့် ခေတ်ရောက်နေလောက်ပြီကွယ်။
အခုလည်း ကုလားကပြားလေးတွေအဖြစ်တော့ ငါတို့တော့ မမြင်ချင်ပေါင်။
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုထက် ကိုယ်ချင်းစာ တရားရယ်. အပြန်အလှန် အသိမှတ်ပြုလေးစားမှုရယ်. သည်းခံနားလည်မှု ရယ် ရှိရင် ဘာသာမတူလည်း အတူတကွ နေထိုင်လို့ရပါတယ်။ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးနဲ့မဆက်နွယ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သံသယစိတ်က မလုံခြုံမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ ကြီးကြယ်ခန်းနားလှတဲ့ စကားလုံးတွေ အိမ်မက်တွေကနိုးထပြီးလက်တွေ့ဖြစ်သင့်တာတွေ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြရင် ငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
ဦးကြိမ်ပြောတဲ့ လုပ်ဇာတ်မဟုတ် ဆုတ်ကပ် ဆိုတာတော့ သဘောကျသဗျာ….။
“ငါ့သာသနာကို ငါ့သားသမီးတွေ ဖျက်ကြလိမ့်မယ်” လို့ ဖတ်ဘူးတယ်ဗျ..။
ဦးကြောင်.. ကျနော်က သတ်လွတ်စားခြင်း မစားခြင်းကို ပြောတာမဟုတ်ပါ..။ ဘုရားရှင်က သူများနောက်လိုက်ဝါဒ မထူထောင်တာ၊
ခွင့်မပြုတာကို ပြောချင်တာပါ…။ အစွဲကင်းတာ ကောင်းပါတယ်..
သာသနာ ဆုတ်ကပ်ချိန်မှာ အဆင်းမှာ မကွဲ ဘို့ ဘဲ လိုပါတယ်..။
မရဲတာကို ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်ခြင်းနဲ့ ဖုံးကွယ်တယ်လို့ …
နေရာတကာငြိမ်ခံဘို့ ကျနော် မပြောဘူး…
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုပေ ခေါင်းပေါ် ချီးတက်ယိုလို့ကိုပေ ကျေနပ်ပြီးနေရင်တောင် အမြင်မတော်ရင် ကျနော်က ပြောမှာပါ.. မပူပါနဲ့ …။
အကျိုးစီးပွား ကို မကာကွယ်ရဘူးလို့ လဲ စာတလုံးမှ မပါပါဘူး…။
ကံဥာဏ် ၀ီရိယ လျှော့နည်းခဲ့ကြတာကို ဆိုလိုတာပါ..။ ၀ါဒရေးရာ လမ်းလွဲတာကို ပြောချင်တာပါ..။
ကထူးဆန်းတို့ ကိုငြိမ်းမောင်တို့ပြောတာကိုလဲ ဘာကို ဆိုလိုချင်တာလဲ သိပါတယ်…။
ပြောဖော်ရေးဖော်ရလို့ လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ဘယ်သူနဲ့ မှ အယူအဆပြိုင်ချင် ငြင်းချင်လို့ ရေးတာမဟုတ်ဘူးလေ..
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကိုက ဒီလိုဇာတာနက္ခတ်နဲ့ ဘဲ တန်လို့ ဖြစ်မှာပါ..။
ကျန်တာတော့ မပြောပါဘူး …
ဒီနေရာလေး ရေးထားတာ မိုက်တယ် ဆိုတာလေး …
အရီး လဲ သတင်း တစ်ခု ဝင်ပြီး ပြောပါမယ်။
အတူတူ အဆဲခံ သင့်လဲ ခံတာပေါ့။ :-)
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စစ်သား တစ်ယောက်ကို မူစလင်အစွန်းရောက်သမား ၂ယောက် သတ် ခဲ့တာရဲ့ နောက်ဆက် တွဲပေါ့။
အဲဒီအကြောင်းကို ပြုပြီး အကြမ်းဖက်လက်တုန့်မပြန်ကြဖို့၊ စိတ်ကို အေးအေးထားကြဖို့ ကို သူ့မိသားစု ကနေ ပြောခဲ့တာပါ။
အဲဒါကြည့်ပြီး Facebook ထဲမှာ မြန်မာတစ်ချို့ အဲဒါနဲ့ ဖွနေတာ ကိုလဲ သတိရလိုက်တယ်။
Inastatement, Drummer Rigby’s family said:
“Lee would not want people to use his name as an excuse to carry out attacks against others”.
အဲဒီ သတင်းထဲမှာဘဲ အဲဒီ အခင်းဖြစ်ပွါးတဲ့ နေရာ က ဗလီအဆောက်အဦ မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ် သူတွေ က ရပ်ကွက်ထဲ က သူတွေ ကိုဖိတ်ပြီး ကော်ဖီ လဘက်ရည် မုန့် တွေ နဲ့ ဧည့်ခံပြီး စကားတွေ ပြောခဲ့ကြတယ်။
သဘောကတော့ ငါတို့ အကြမ်းဖက်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး၊ ငါတို့လဲ အေးချမ်းစွာ နေချင်သူတွေပါလို့ ပြတာပါ။
အဲဒီမှာ နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ ၊ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေ ပါ သွားခဲ့ကြတယ်။
ဒီမှာ တစ်ဖက်က သဘောထားကြီးတာကို တစ်ဖက်က အသိအမှတ်ပြုတာ ကို ပြတဲ့ ပွဲပေါ့။
နှစ်ဖက်လုံးက ငါတို့ အစွန်းရောက်တွေမဟုတ်ဘူး လို့ ပြတဲ့ပွဲပေါ့။
မြန်မာပြည်မှာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အင်မတန်ကာကွယ်ချင်ပါတယ် ပြောသူ တွေ ကရော ဒီလို သည်းခံ မေတ္တာ တရား ကို ကိုယ်က စိတ်ပါလက်ပါ ပေးခဲ့ဘူး လို့လား။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုပြီး ငါးပါးသီလ တောင် လုံရဲ့လား။
ကိုယ့်ဖက်က စည်းမလုံဘဲ နဲ့ အမုန်းကို အမုန်း နဲ့ တိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ သေနတ်သံ တွေကြားမှာ နေရဖို့ သာရှိတာ။
တစ်ဖက် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ် သူတွေ ဖက်ကလဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ထင်နေတာတွေ မဟုတ်တာ ပြသဖို့ လိုတာ။
အေးအေးချမ်းချမ်း နေချင်သူတွေ၊ အများ နဲ့ တစ်သားထဲ ရှိနေသူ တွေ လို့ ထင်ရှားအောင် ပြသင့်တာ။
သူများလုပ်တိုင်း လိုက်လုပ် ရမယ်လို့ မဆိုလိုချင်ပေမဲ့ တကယ်ဘဲ အေးအေးချမ်းချမ်း နေချင်ရင်တော့ ကောင်းတာလုပ်ပြနေသူတွေ ဆီက အတုယူသင့်တာ ယူရမှာပါ။
ဒီလိုပြောလို့ နင်က ဘာမို့ဒီလိုပြောရတာလဲ လို့ ဒေါသတစ်ကြီး လာမေးမယ်ဆို ရင် တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်မှန်ထဲ ကြည့်ပြီး ငါရော ဘာလဲ အရင်ပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါ။
ပြီးတော့လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကာကွယ်သူလို့ တော့ မပြောလိုက်ပါနဲ့။
” ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကာကွယ်သူလို့ တော့ မပြောလိုက်ပါနဲ့။
ရီစရာ ဖြစ်နေမှာမို့ပါ ”
အရီး ရေ ။
ထောက်ပြသွားတာလေးတွေ ကောင်းပါတယ် ။
ကျနော်ကတော့ ရီတောင် မရီနိုင်ပါဘူးဗျာ ။
ဒီ အစွန်းရောက်တွေကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ ၊
ဒီ တစ်ချီမှာ တော်တော်လေး မျက်နှာပျက်ရပါတယ် ။
ကျနော်လဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် Liberal ဖြစ်လှပြီထင်တာ ၊
အခု ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အရေးကိစ္စတွေဖြစ်မှ ၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် Liberal မ ဖြစ်မှန်း နှင့် ၊
ကိုယ့်စိတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘက်ကို တော်တော် ယိမ်းနေမှန်း သတိပြုမိလာတယ် ။
( ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘက်က / ကိုယ့် ဘက်က ) အစွန်းရောက်မှုတွေကို ၊
( ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ) ထောက်ပြ ရှုံ့ချမှုတွေ မလုပ်ပဲနေမိတာဟာ ၊
အဲဒီ အစွန်းရောက်မှုတွေကို သွယ်ဝိုက် ထောက်ခံမိ နေသလိုပဲလို့ ၊ ခံစားမိတယ် ။
ခက်တာက ၊ ကိုယ့်စိတ်ကလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘက်ကို တော်တော် ယိမ်းနေမိတယ် ။
ဒီပို့စ်မှာ ဆိုလိုရင်း တချက်သွားတွေ့တယ် ….
တခါကတော့ ကိုယ့်ထက်သက်ကြီးဝါကြီးတယောက်ကို အဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မေးဖူးတယ် …
symbol ခေါ်မလားပေါ့ … အတည်အတေကြာအောင် လွတ်လွတ်ကင်းကင်းနဲ့ ပြဌာန်းသင့်တဲ့ အရာ 。。。
အိုဘဲ့ ၉၆၉ 。。。
ဆိုတော့ မဆီမဆိုင် ပြေးမြင်တာက。。。
မြန်မာပြည်မှာ London ဆိုတာကြီးကို ဆေးလိပ်လုပ်ပစ်ခဲ့ဖူးတယ် 。。。လာလို့ ဒီတံဆိပ် အပိတ်ခံရတာတုန်း မေးကြည့်တော့ …… အွန်း
သူများနောက်က လိုက်လုပ်တာတော့ အားမပေးကြောင်း ..
ဆက်ဆွဲရင် ဆွဲသလောက် ကျယ်ပြန့်တာမို့ လက်ရှောင်ပါပြီဗျာ …
” ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကိုက ဒီလိုဇာတာနက္ခတ်နဲ့ ဘဲ တန်လို့ ဖြစ်မှာပါ..။
အဘ လဲ ၊ အဲဒီ သဘောထားလေး အတိုင်းပါပဲကွယ် ။
အခု ကိစ္စတွေနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ၊
အရင် Post က Comment လေးပဲ ပြန်ရေးချင်ပါတယ် ။
အခုလည်း ၊ လားရှိုးမှာ ဆော်ကြလေရဲ့ ။ ဟီ ဟိ ၊ ကောင်းပါလေရဲ့ ကွယ် ။
၁ ။ သတင်းတွေက တစ်နေ့ တစ်မျိုး ဆိုတော့ ဖတ်ရတာ မရိုး / မပျင်း ရတော့ဘူးပေါ့ကွယ် ။
၂ ။ ချကြ နှက်ကြရင်း ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ဆင်းရဲသွားတော့လည်း ၊
ကိုယ်ချမ်းသာတာ ပိုပေါ်လွင်တာပေါ့ကွယ် ။ ကောင်းပါ့ ။
တစ်ခုတော့ ၊ တောင်းပန်ပါရစေ ။
လုပ်ရင်လည်း အပြတ်သာ လုပ်ကြပေတော့ ။
( ဥပမာ ။ ။ နှစ်ဖက် စုစုပေါင်း လူ တစ်သိန်းခန့် သေဆုံးသွားသည် ။ ဆိုသလိုပေါ့ )
နို့မို့ရင် ၊ ဟစိ ဟစိ ၊ မထိတထိ နှင့် ၊ အာရုံနောက်တယ် ။
အဲလို ၊ ပြတ်ပြတ် သားသား ဆော်ကြပြီးမှပဲ ၊ ပွဲပြတ်ပြီးမှပဲ ၊
တိုင်းပြည် တိုးတက် ချမ်းသာအောင် စ လုပ်လို့ ရမယ်လေ ။
အဲဒီတော့ ၊ မြန်မြန်ဖြတ်ကြ ၊ နင်တို့ ပွဲပြတ်တာကို ၊ စောင့် နေတာ ။
နို့မို့ရင် ၊ အဘ တို့ တစ်သက်သာကုန်သွားလိမ့်မယ် ၊
တိုင်းပြည် တိုးတက် ချမ်းသာအောင် လုပ်ရမယ့် အချိန်ကို ရောက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ။
ချချင်လဲ အပြတ်သာချ ၊ မချချင်ရင်လဲ တော်ကြတော့ ။ မြန်မြန်ဖြတ်ကြ ။
အခုလည်း မလေးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ ၆ ယောက်တော့ အသတ်ခံလိုက်ရပြီတဲ့ ။
တင်​ပြချက်​​တွေကိုဖတ်​ရှုအား​ပေးသွားပါတယ်​။ အဓ်ိက ကတရားဥပ​ဒေစိုးမိုး​ရေးမရှိလို့ပါ။ပြည်​သူအများစုက
စဉ်းစား​တွေး​ခေါ်တတ်​တဲ့ ပညာညဏ်​နည်းလို့ပါ။ကိုယ်​​တွေကဒီမှာ သူတို့ကိုလုပ်​တာနည်းနည်း၊သူတို့နိုင်​ငံမှာ
နဂိုကတည်းက အစွန်း​ရောက်​သတ်​ရဲ၊ဖြတ်​ရဲသူ​တွေပါ။သူတို့လိုပြိုင်​မိုက်​ရင်​ ​နောက်​ဆုံးကိုယ်​​တွေပဲနာလိမ့်​မယ်​။ပြုသူအသစ်​၊ဖြစ်​သူအ​ဟောင်းပါ။မလုပ်​ခင်​ အကျိုးဆက်​ကို အရင်​စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်​ကြပါလို့အကြံပြုပါတယ်​။မအ​အောင်​ စာ​​တွေများများဖတ်​ကြပါလို့တိုက်​တွန်းလိုက်​ပါတယ်​။
မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. မိုင်နရတီ(အနည်းးးးးးးးးးးးး စု)ဖြစ်ပြီး.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအများစုကိုကိုယ်စားမပြုကြောင်း…။
သက်သတ်လွတ်ဆိုသူမြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုတော့ … ဒေ၀ဒတ်ဘာသာဝင်တွေလို့.. ပြောဆိုသုံးသင့်ကြောင်း..
..သက်သတ်လွတ်ကိုဝိနည်းထဲထည့်ပေးဖို့… ဗုဒ္ဓဆီမှာ ဒေ၀ဒတ်ခွင့်တောင်းတာ… ဗုဒ္ဓကခွင့်ပြုတော်မမူတာကို.. ဒေ၀ဒတ်က သံဃာဂိုဏ်းခွဲပြီး.. ဂိုဏ်းသစ်ထောင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါကြောင်း…
မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းလည်း.. (မတရား) အနိုင်ကျင့်ကြတာဖြစ်ပါကြောင်း…
မယုံရင်… မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းပြန်ကြည့်ကြစေချင်ပါကြောင်း…
ပထမမြန်မာနိုင်ငံထောင်ခဲ့တဲ့.. အနော်ရထာလက်ထက်ကစလို့.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မွန်တွေကို.. စစ်တိုက်သတ်ဖြတ်ပြီး… မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုထောင်ခဲ့တာလို့.. မှတ်တမ်းရှိပါကြောင်း..။
ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆီကလည်း.. စစ်တိုက်ပြီး.. မဟာမြတ်မုနိဆင်းတုကြီး.. လုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါကြောင်း…။
ကမ္ဘာသမိုင်းမှာမရှိဘူးတဲ့.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်တပ်(DKBA)- Democratic Karen Buddhist Army) ကိုထောင်ခဲ့ပြီး.. ကရင်အချင်းချင်းလည်း.. စစ်တိုက်သတ်ဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါကြောင်း…။
လောလောဆယ်မှာကို.. ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ(အကြိမ်ကြိမ်) အကျဉ်းချခံရပြီး.. ထောင်ထဲအခုထိရှိနေသေးတဲ့.. ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေဖြစ်တဲ့.. မိုးပြာဘုန်းကြီးတွေကြည့်ကြစေချင်ကြောင်း…
ရှေ့မှာလည်း.. ရှင်ဥက္ကဌလို ဆရာတော်တွေရှိပါကြောင်း…။
အခုအစိုးရဖွင့်ဆိုတဲ့.. . “ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံရသူ”ဆိုတဲ့.. အဓိပ္ပါယ်နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သူများဖြစ်ပေမယ့်.. ဘယ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာမှာမှ.. ပါလာတာသတိမထားမိပါကြောင်း..
( လွတ်နေရင်တော့.. ဆောရီးနော.. )
ဒါကြောင့်.. မြန်မာပြည်ဟာ.. ကမ္ဘာမှာ(ကမ္ဘာမှာ) ဘာသာရေးအဖိနှိပ်ဆုံးတိုင်းပြည်အဖြစ်.. ဆက်လက်မှတ်တမ်းဝင်ချီတက်နေပါကြောင်း.. :buu:
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က.. သီဟိုဠ်ကြွတယ်လို့.. သမိုင်းအထောက်အထားမရှိပါကြောင်း..
ဗူဒ္ဒဘုရားရှင် သာသနာထက် နှစ်၇၀၀ ကျော်နောက်ကျမှ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့
သူများဘာသာကို တုပြီး နံပါတ်တွေ ထွင်ကြတယ်…။
အစ္စလမ်သာသနာဟာ.. ဗုဒ္ဓထက်နှစ် ၁၄၀၀လောက်နောက်ကျပါကြောင်း..
ခရစ်ယန်သာသနာဟာ… ဗုဒ္ဓထက်နှစ် ၆၀၀လောက်နောက်ကျပါကြောင်း..
(အထက်ပါစာများကို.. စစ်အစိုးရခေတ်.. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဖတ်ကြားသောလေသံဖြင့်.. ဖတ်ပါရန်.. )
Islam = 622 CE
Christianity = c. 33 CE
မြတ်စွာဘုရားက သက်သတ်လွတ်စားခြင်းကို ဝိနည်းထည့်ခွင့် မပေးခဲ့ပေမဲ့ ဒေဝဒတ်ဂိုဏ်းသားလို့လည်း မသမုတ်ခဲ့ဗာဂျောင်း၊ ရှေးခေတ် မြန်မာမင်းတွေ နယ်မြေစားကျက်လုတာ ထေရဝါဒနှင့် မသက်ဆိုင်ဗဲ ပဒေသရာဇ်စနစ် ဆိုးမွေသာဖြစ်ကြောင်း မိုးပျာကိုင်းဓါး မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဂျီး သိစေအပ်သည်.. :harr:
ခုလို ထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ..
ကျနော် နှစ်တွေ အတွက်မှား ထားတယ် ..အမှတ်မှားတာပါ..။ ကျေးဇူးဘဲ..။
သီဟိုဠ်ကို ဘုရားရှင် ကြွတယ်လို့ကျနော် မဆိုလိုပါ..။
ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး က ဒီလိုမိန့် ဖူးတယ်ဗျ
သူကြီးမင်းအားလည်း ပို့ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
ထိုအဖြစ်အပျက်မျိုး မြန်မာပြည်မှာသာဖြစ်ပါက တိုင်းပြည်ပျက်အောင်ထိ ပဋိပက္ခဖြစ်သွါးနိုင်ကြောင်း
ပြောသင့်တဲ့အကြောင်း အရာ မို့ ..
ဖတ်သင့် လို့ဖတ်..ခဲ့ပါကြောင်းးးး